कामदार प्रधानमन्त्री - पत्याउनु हुन्छ? - साप्ताहिक
जापानीहरू मेहनती हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो काम प्रायः आफै गर्छन् । यो कुरा औसत जापानीमा मात्र नभै त्यहाँका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेमा पनि लागू हुन्छ । जापानजस्तो सम्पन्न देशका प्रधानमन्त्रीलाई नपुग्दो के होला ? उनका लागि काम गर्ने कर्मचारीहरूको अभाव पनि पक्कै छैन ।
तैपनि हालै उनको एउटा तस्बिर भाइरल भयो, जसमा उनी आफ्नो घरको ढोकामा किल्ला ठोकिरहेका देखिन्छन् । वास्तवमा त्यो दृश्य उनी हालै क्यानाडा भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले उपहार दिएको काठको डोर नकर (ढोका खोल्न संकेत गर्ने यन्त्र) आफ्नो घरको मूल ढोकामा लगाउँदाको हो ।